MOU စနစ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ၃ နိုင်ငံသားများလည်းဗီဇာဖြေလျော့ခွင့်ရ – Myanmar Live
MOU စနစ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ၃ နိုင်ငံသားများလည်းဗီဇာဖြေလျော့ခွင့်ရ
May 7, 2020 May 7, 2020 - by iampmy
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို ၂၀၂၀ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားကြောင်း ထိုင်းအစိုးရက ၂၀၂၀ မေလ ၅ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း Mou စနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ (မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို) ၃ နိုင်ငံသားများကို ၂၀၂၀ မေလ ၁ ရက်နေ့မှ – ၃၁ ရက်နေ့ထိ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းယာယီ နေထိုင်နိုင်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၁၊ MOU ဖြင့်ဝင်လာတဲ့ ၃ နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်ကြတဲ့ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ စာအုပ်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ၄ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့်ပြန်ထွက်သွားရန်ကိစ္စတွင် အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက် မေလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မေလ ၃၁ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၎င်း၊ အထောက်အထားများကို ဘာမှပြုလုပ်ရန် မလိုဘဲအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးထားပါသည်။
၂၊ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Border Pass ကို်င်ဆောင်ပြီးဝင်လာတဲ့ ၂ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား
မေလ ၃၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ အထောက်အထားသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တာကြောင့် မေလ ၃၁ ရက်နေ့အထိကို အလိုအလျောက်နေထိုင်ခွင့်ပေးသွားပါမည်။ အရေးပေါ်ကာလ (Carfew) ရုတ်သိမ်းသည့်နေ့မှစ၍ MOU လုပ်သား ၁၅ ရက်အတွင်းပြန်ထွက်သွားရမည်!! Border Pass ကိုင်ဆောင်သည့်သူများ ၎င်း အမိန့်ကို ရုတ်သိမ်းပြီးသည့် ၇ ရက်နေ့အတွင်း ပြန်ထွက်သွားရပါမည်!!
TaggedLabor newslabour newsMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsMyanmarliveMyanmarlivenewsအလုပ်သမားရေးရာသတင်း
Previous Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ မေလ ၄-၁၀ ရက်ထိ
Next Article ကိုဗစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းနိုင်ရန် ဘာသာစကား ၃ ခုဖြင့်ဟော့လိုင်းဝန်မှုမှုဖွင့်ပေး